Nhau - Mhosva yekuongorora matanho e hydraulic system ye otomatiki kuumbwa muchina
Mhosva kuongororwa matanho e hydraulic system ye otomatiki kuumbwa muchina
Pane zvakawanda zvinokanganisa mu hydraulic system yemuchina wekugadzira muchina. Semuenzaniso, kusvibiswa kwemafuta kunogona kukonzera iyo hydraulic control system yekushanda kumanikidza, kuyerera kana kunongedzera kune kusashanda, uye kuunza kuoma kukuru kune iyo hydraulic system yekukanganisa kuongororwa. Nhanho inotevera ndeyekugovana matanho ekuongororwa.
1. General misimboti yekukanganisa kuongororwa
Iyo hydraulic system kutadza kwemazhinji michina yekuumba haina kuitika kamwe kamwe. Isu tinogara tiine yambiro yakadaro tisati takundikana. Kana yambiro iyi ikasateererwa, inokonzeresa imwe nhanho yekusashanda panguva yekusimudzira. Zvikonzero zvekutadza kweiyo hydraulic control system yakawanda, kwete imwe yakasarudzika. Kuti uwane nekukurumidza uye nemazvo kuongorora system zvikanganiso, nyatsonzwisisa hunhu nemitemo ye hydraulic zvikanganiso.
2. Tarisa nzvimbo inoshanda uye yekugara yeiyo hydraulic control system
Iyo hydraulic system yemuchina wekuumba inoda kushanda zvakajairika, uye imwe nharaunda yekushanda nemamiriro ekushanda anodikanwa sepuratifomu. Naizvozvo, pakutanga kwekukanganisa kuongororwa, isu tinofanirwa kutanga taziva uye toona kuti mashandiro uye magariro eiyo hydraulic control system nematambudziko ezvakatipoteredza enyika dzakapoteredza zvakajairika, uye nekukurumidza kugadzirisa zvisina kukodzera nzvimbo yekushanda uye yekudzidza nemamiriro.
3. Sarudza nzvimbo panowanikwa mhosho
Pakutonga iko iko iko iko kukanganisa, zvakakanganiswa munzvimbo yacho zvinofanirwa kutemerwa zvinoenderana nechikanganiso chiitiko uye hunhu, zvishoma nezvishoma kudzikisira chiyero chemhosho, ongorora chakakonzeresa chikanganiso, tsvaga iyo chaiyo nzvimbo yekukanganisa, uye nyore matambudziko akaoma.
4. Gadzira yakanaka oparesheni rekodhi
Kukanganisa kuongororwa kunoenderana nekumhanya marekodhi uye imwe ruzivo system dhizaini parameter. Iko kuisirwa kwehurongwa hwekushanda marekodhi ndiyo yakakosha hwaro hwekudzivirira, kutsvaga uye kugadzirisa kutadza. Kugadzira tafura yekuongorora matambudziko ekushomeka kwemidziyo kunogona kubatsira makambani kukurumidza kuona kutadza kwezviitiko.
Post nguva: Kukadzi-22-2021
Sandbox, Punch Out Muchina, Chinwiwa Mould Machine, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Chinwiwa richigadzirisa, Richigadzirisa vachikanda chinu,